Dibudhac ku yimid kulankii Amniga Qaranka iyo sababta dhalisay – Madal Furan
Hoy > Warka > Dibudhac ku yimid kulankii Amniga Qaranka iyo sababta dhalisay
Dibudhac ku yimid kulankii Amniga Qaranka iyo sababta dhalisay
Editor March 28, 2018 Warka 0
Baydhabo (Madal Furan) Magaaladda Baydhabo ee xarunta u ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa la filaayey in maanta uu ka furmi lahaa shirkii Golaha Amniga Qaranka, balse uu kulakaasi uu baaqday iyadoo aan la sheegin sababta ka danbeysa.
War saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii horay ay Guddiga Aminiga Qaraku ku yeesheen magaaladda Muqdisho 28kii bishii Maarso ayaa lagu sheegay in kulanka xiga uu ka dhici doono magaaladda Baydhabo.
Si dhab ah looma oga arrinta baajisay shirka Amniga Qaranka balse waxaa warar la isla dhex marayo ay sheegayaan in shirku u baaqday arrimo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee xiligan ka dhex tollan golayaasha dowladda oo uu ugu weyn yahay kan Baarlamaanka Dowladda federaalka Soomaaliya.
Horay ayaa loo hadal hayey in uu dib u dhac ku yimid hawl maalmeedkii Wasaaradda Dowladda qaarkood kadib markii ay Wasiiradii masuulka ka ahaa ay dhex boodeen mooshinka la doonayo in lagu rido Guddoomiyaha Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Dalka Maraykanka oo hal milyan ku bixinaya xogta wiilka Osama Bin Ladin